တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အိပ်မက်ထဲမှ အမှားတခု
ဟိုတလောက မြန်မာဘလော့တွေဆီ အလည်အပတ်သွားရင်း မြန်မာချစ်သူများအတွက် အိပ်မက်များ ဆိုတဲ့ ဘလော့ကိုလည်း ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အိပ်မက်ဘလော့က တခြားဘလော့တွေနဲ့မတူဘဲ အကြောင်းအရာ စုံစုံလင်လင်၊ စာရေးသူ စုံစုံလင်လင်နဲ့ မဂ္ဂဇင်းလေး တစောင်လိုပါပဲ။ ဖတ်လို့လည်း တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။
ဖတ်နေရင်း တနေရာအရောက်မှာ အံ့အားအသင့်ကြီးသင့်ပြီး ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ လို့ စုတ်သပ်ညည်းတွားမိသည် အထိ ဖြစ်ရပါတယ်။
ခေတ်ဟောင်းမြန်မာကဗျာဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အောက်ပါအတိုင်း ရေးထားပါတယ်။
ကဗျာချစ်သူများအတွက် ခေတ်ဟောင်းမြန်မာကဗျာအရေးအသားကို လေ့လာနိုင်စေရန် မဟာဆွေ၏ လေးလုံးဆက်ကဗျာ အားဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ညို့ညို့ပြာပြာ၊ ဆင်ပြင်လျာမူ၊ ပြစ်မှာမစက်၊ဆယ်နှစ်သက်က၊ ချောညက်ညွတ်သွယ်၊ နတ်နှင့်ဆွယ်၍၊ရွယ်လည်းရွယ်ပျို၊ ညိုလည်းညိုဝင်း၊ ဖြူရွှင်းရောရု၊နောင့်သက်စုကို၊ နှိုင်းရှုချေမူ၊ ထွားပြာဖြူသည်။ ။ မတူ၏သို့ တူ၏သို့ ။
မို့မိုအာကာ၊ မိုဃ်းဒေ၀ါလျှင်၊ ဘယ် ညာ တောင် မြောက်၊လေပြည်လျှောက်၍၊ ဖြိုးဖြောက်ရိုးရဲ၊ လျှပ်ပန်းကြဲလျက်၊မစဲညှင်းညှင်း၊ ကြည်းတည့်လျင်း၍၊ င၀င်းလှည့်လို၊လွမ်းစိတ်ဆိုသို့၊ လေချိုပေါင်းညီ၊ ရုံးဆုပြီဟု၊မယ်ဆီတူရှု၊ သည်မိုးဖြူသည်။။ ကလူ၏သို့ မြှု၏သို့ ။
သို့သို့ဘာသာ၊ မယ့်နေရာကို၊ အာကာမှိုင်းဝေ၊ နေ့တိုင်းစွေက၊ သက်ဝေမြေခဲ၊ သူရဲကြောင့်သာ၊ လွမ်းဗျာပါမူ၊ တိမ်ပြာကကွက်၊ တိမ်နက်မည်းမို့၊ တိမ်ခြေညို့နှင့်၊ ထပ်ပို့မစဲ၊ ရွာသွန်းကြဲက၊ပုလဲပမာ၊ ဆင်းကလျာလျှင်၊ သစ္စာမြဲတူ၊တလျက်ယူသည်။ ။ မဖြူ၏သို့ ဖြူ၏သို့။ ။
စာကြွင်း။ ။ ဤကဗျာထဲမှ ဇာတ်ကောင်သည် သူချစ်သော သူ၏ချစ်သူမိန်းမပျိုငယ်၏အသက် ၁၀ နှစ်ထဲမှ ချစ်နေခဲ့ရပြီ၊ အရွယ်ရောက်သည်ချိန်ထိစောင့်မျှော်ချစ်ရလွမ်းရကြောင်း အသိပေးပုံလေးကို ရေးဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျမလေ့လာခဲ့သလောက်တော့ အထက်ပါကဗျာဟာ ပိုဒ်စုံရတု တပုဒ်လို့သိထားပါတယ်။
ရတုရေးသားဖွဲ့ဆိုရာမှာ တပိုဒ်ထဲဆိုရင် ဧကပိုဒ် ရတု၊ နှစ်ပိုဒ်ဆိုရင် အဖြည့်ခံရတု (နောက်တဦးဖြည့်လိုက ဖြည့်ရန် ရေးဖွဲ့တားခြင်း) ၊ သုံးပိုဒ် ဆိုရင်တော့ ပိုဒ်စုံရတုလို့ မှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်။
ပြီးတော့ “ကလူ၏သို့ မြှူ၏သို့” လို့ ကျမတို့ သိနေတဲ့ ဒီရတုကို စာရေးဆရာကြီး မဟာဆွေ ရေးတယ်လို့ မမှတ်သားခဲ့ဖူးပါ။ ရေးသူကို ရုတ်တရက် ခေါင်းထဲမှာ စဉ်းစားမရတာကြောင့် မြန်မာစာပေနဲ့ အကျွမ်းတ၀င်ရှိသူတယောက်ကို လှမ်းမေးလိုက်ပါတယ်။ သူသည်လည်း ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်နေပြီး အထက်တန်း မြန်မာကဗျာစာအုပ်မှာ ရှာကြည့်ပါလို့ ကျမကို အကြံပေးခဲ့တယ်။
တက်တက်စင် လွဲနေတဲ့ ဒီအမှားကြီးကို ဒီအတိုင်းကြည့်နေရတာ ကျမစိတ်ထဲ ကသိကအောက်ဖြစ်လွန်းတာနဲ့ပဲ ဒီကနေ့ အဖေ့စာအုပ်စင်ကို မွှေနှောက်ရှာဖွေရာက “စာဆိုတော်များရတု ပေါင်းချုပ်” ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာပြီး မာတိကာကို ကမန်းကတန်း ဖွင့်ရှာလိုက်ပါတယ်။
၃၀။ ၎င်းဖြည့် န၀ဒေးကြီးဆို အဖြည့်ခံရတု (၆)
(တ) သို့သို့သာသာ .. ချီ (စာမျက်နှာ ၅၇)
အလျင်အမြန်ပဲ စာမျက်နှာ ၅၇ ကို ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။
၃၀။ န၀ဒေးကြီးဆို အဖြည့်ခံရတု
(ပ) ညို့ညို့ပြာပြာ၊ ဆင်းပြင်လျာမူ၊ ပြစ်မှာမစက်၊ ဆယ်နှစ်သက်က၊ ချောညက်ညွတ်သွယ်၊ နတ်နှင့်ဆွယ်၍၊ရွယ်လည်းရွယ်ပျို၊ ညိုလည်းညိုဝင်း၊ ဖြူရွှင်းရောရု၊ နောင့်သက်စုကို၊ နှိုင်းရှုချေမူ၊ ထွားပြာဖြူသည်။ ။ မတူ၏သို့ တူ၏သို့ ။
(ဒု) မို့မိုအာကာ၊ မိုးဒေ၀ါလျှင်၊ ဘယ်ညာ တောင်မြောက်၊ လေပြည်လှောက်၍၊ ဖြိုးဖြောက်ရိုးရဲ၊ လျှပ်ပန်းကြဲလျက်၊မစဲညင်းညင်း၊ ကျူးတည့်လျင်း၍၊ မ၀င်းလှည့်လို၊ လွမ်းစိမ့်ဆိုသို့၊ လေညိုပေါင်းညီ၊ မယ့်ဆီတူရူ၊ သည်မိုးဖြူသည်။။ ကလူ၏သို့ မြှူ၏သို့ ။
(တ) သို့သို့သာသာ၊ မယ့်နေရာကို၊ အာကာမှိုင်းဝေ၊ နေ့တိုင်းစွေက၊ သက်ဝေမြခဲ၊ သူရဲကြောင့်သာ၊ လွမ်းဗျာပါမူ၊ တိမ်ပြာမကွက်၊ တိမ်နက်မည်းမို့၊ တိမ်ခြေညို့နှင့်၊ ထပ်ပို့မစဲ၊ ရွာသွန်းကြဲက၊ ပုလဲပမာ၊ ဆင်းကလျာလျှင်၊ သစ္စာမြဲတူ၊ တ-လျက်ဟူသည်။ ။ မဖြူ၏သို့ ဖြူ၏သို့။ ။
န၀ဒေးကြီးရဲ့ အဖြည့်ခံရတုကို ရှင်သူရဲက တပိုဒ် ထပ်ဖြည့်ထားတာပါ။
လေးလုံးစပ်ကဗျာနဲ့ ရတုဟာ ကွာခြားလှပါတယ်။ ဒီလို ရတုကြီးတပုဒ်ကို လေးလုံးစပ် (ဒါတောင် လေးလုံးဆက် လို့ရေးထားပါသေးတယ်၊) လို့ ပြောတာဟာ ကဗျာအကြောင်း သေချာမသိလို့ဖြစ်မှာပါပဲ။
အများရှေ့မှောက်ကို စာပေရေးသား ဖြန့်ဝေမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ဗဟုသုတ လက်ဆင့်ကမ်းဝေမျှမယ်ဆိုရင် အချက်အလက် တိကျမှန်ကန်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က သိပ်မသိဘဲ ထင်ကြေးနဲ့ ရေးတာတော့ မကောင်းဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်က မသေချာဘဲ ဇဝေဇ၀ါရေးလိုက်တာကို လုံးဝမသိတဲ့သူမျိုးက အမှတ်မှားသွားပြီး သူက တဆင့် နောက်တယောက် နောက်တယောက် မှားပြီးရင်း မှားရင်းနဲ့ နောက်ဆုံး အမှန်ဟာ ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာဘလော့ ရေးသားနေသူအပေါင်း သိရှိစေရန် အလို့ငှာ အမှန်ကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
(ဒီပို့စ် တင်လိုက်ပြီးပြန်ကြည့်လိုက်တော့ မနေ့ညက နှစ်သစ်ကိုကြိုတဲ့ ပို့စ်တခု ပျောက်သွားပါတယ်။ အားလုံး မင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေလို့ ဒီကပဲ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်)
Posted by မေဓာဝီ at 3:42 AM
မနက်က နှစ်သစ်ဆုတောင်းဖို့ ကောန်မန့်ပေးဖို့ဟာ အဆင်မပြေလို့ မပေးလိုက်ရဘူး။ အမရေးထားတဲ့ ပိုစ့်ကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အဲဒါ ညီမစက်ထဲမှာ ကျန်နေတယ်။ အမလိုချင်ရင် ပို့ပေးလိုက်မယ်။ ဘယ်ကိုပို့ပေးရမလဲ။
ကျေးဇူးပါ ညီမ ဖြူဖြူရေ ..
မမေ စက်ထဲမှာတော့ စာက ကျန်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အချိန်လွန်သလိုဖြစ်သွားလို့ မတင်ချင်တော့တာပါ … ။
နှစ်သစ်အကြိုဆုတောင်းဆိုတော့ လေ … နောက်များကျသွားပြီလားလို့ … ။
The right to write …what does it means??
I question to my self.
Ya I agree with you at that point.. Saying that an article disclose to the public should be as possible as accurate, because everyone tend to go wrong idea.
But on the other hand ,it isaprivate blog so that can be written whatever you feel. I am very much appreciated that you can find out the actual fact.
May be the blogger forgot about who wrote it, or he or she doesn’t have any solid reference or beyond his reach . I mean he must be away form Burma where he could not get the resources …he was writing what he thought of.
I have seen that poem too when I wasakid, if I was not mistaken that poem was from our9or 10 standard’s poem book.
Happy New Year, Ah Ma Yay
1/01/2007 9:39 PM
i agree with ma may. Since i start read the poem, i already known who writer is. He is Pyay Nawaday gyi. i read his story since i was young from my father's library.Thank you for your correction. Cheers!
hi i'm ta_yae_noe from ainmat
first i want to say to all 'sorry' for that poem in Ainmat. i forgot to research for the poem. that is my mistake. and also thx u to tell me right answer.
1/14/2007 8:04 AM